विश्वचर्चित २६ बर्षिया गायिका सेलेना ६८ वर्षे वृद्धसँग आखिर किन गर्दैछिन् विवाह ? «
विश्वचर्चित २६ बर्षिया गायिका सेलेना ६८ वर्षे वृद्धसँग आखिर किन गर्दैछिन् विवाह ?
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार २२:२७
२६ वर्षे चर्चित अमेरिकन गायिका एवं नायिका सेलेना गोमेजले ६८ वर्षे बिल मुर्रेसँग विवाह गर्ने भएकी छिन्। सेलेना गोमेजले ‘द डेड डोन्ट लाइ’का सहकर्मी बिल मुर्रेसँग विवाह गर्न लागेको इन्टाग्राममार्फत् जानकारी दिएकी हुन्।
गायिका एवं नायिका आफ्नो पहिलो कान्स फिल्म फेस्टिबलमा उपस्थिती जनाएपछि घर फिर्ता भएकी छिन्। कान्स फिल्म फेस्टिबलको रेड कार्पेटमा हिँड्दाको अनुभव साझा गर्न सेलिनाले इन्स्टाग्रामको सहारा लिएकी छिन्।
उनले बिहिबार आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा लेखेकी छिन्, ‘म यो फिल्मको सदस्य हुन पाउँदा निकै भाग्यमानी महसुस गरिरहेकी छु। अँ साँच्ची, म र बिल मुर्रे विवाह गर्दैछौं।’
कान्सको रेड कार्पेटमा बिलले गोमेजसँग कानेखुसी गरिरहेको देखेपछि यी दुईको प्रेम सम्बन्धबारे विभिन्न समाचार प्रकाशित भएका थिए। उनीहरु एक–अर्काको हात समातिरहेको पनि भेटिएका थिए। ६८ वर्षे मुर्रेले भ्यानिटी फेयरसँगको कुराकानीमा गोमेजको निकै तारिफ गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘मलाई उनी निकै मनपर्छ । उनी निकै तीक्ष्ण छिन्, असाध्यै दयालु पनि। आफूलाई मनपर्ने पप आइकन भेटिँदा निकै खुसी छु।’ यद्यपी, पिंकभिल्लाका अनुसार सेलेनाको मुर्रेसँग विवाह गर्ने भन्दै ठट्टा मात्र गरेकी हुन्। –एजेन्सीको सहयोगमा
पढाइ चलिरहँदा कक्षाकोठामै यि २ छात्राको लाजमर्दो हर्कत, थाहा पाउदा चकित पर्नुहुनेछ !
कक्षाकोठामै लाजमर्दो काम गरेको अभियोगमा एक सरकारी विद्यालयले आफ्ना २ छात्रालाई स्कुलबाटै निकालिदिएको छ । उनीहरुले कक्षामा पढाइ चलिरहेका बेला पछाडि बसेर निकै घृणित काम गरिरहेका थिए । उनीहरुको हर्कतबारे कक्षाकै एक विद्यार्थीले शिक्षकलाई बताएपनि उनीहरुलाई शिक्षकले रंगेहात समातेका हुन् । यी दुवै छात्राहरु ९ कक्षामा पढ्ने भएको बताइएको छ । घटना आन्ध्र प्रदेशको हो । यी दुई छात्राले कक्षाको अन्तिम बेचमा बसेर कोल्ड ड्रिंकमा रक्सी मिसाएर पिउँदै थिए । पक्राउ परेपछि उनीहरुले आफ्ना पिताका कारण आफूहरुलाई रक्सी पिउने लत लागेको बताएका छन् ।
निदामनुरुको एक सरकारी स्कुलमा ९ कक्षामा पढ्ने यी दुई छात्राको स्कुलका प्रधानाध्यापक सुरेश कुमारका अनुसार उनीहरुले बियरको बोतल स्कुल ब्यागमा लुकाएर ल्याएका थिए । कक्षाका अरु विद्यार्थीहरुलाई शंका नहोस् भन्नको लागि उनीहरुले सफ्ट ड्रिंकमा बियर मिसाएर कक्षामै पिउन थालेका थिए । कक्षाका विद्यार्थीहरुले सोध्दा उनीहरुले साथीहरुलाई कुरामा भुलाएका थिए तर एक विद्यार्थीलाई रक्सीको शंका लागेपछि उनले शिक्षकलाई भनिदिए । शिक्षकले जब उनीहरुको स्कुल ब्याग चेक गरे भित्रबाट बियरका खाली केन निस्किए ।
त्यसपछि उनीहरुका अभिभावकलाई खबर गरियो र उनीहरुलाई कारवाही गरियो । दुवै छात्रालाई स्कुलबाट निकालिएको छ । उनीहरुको क्रियाकलापले अन्य बालबालिकामा गलत असर परेको भन्दै उनीहरुलाई निकालिएको हो । यी दुवै छात्राका पिता रक्सीको लत भएका भएको बताइएको छ । पिताकै रक्सी चाखेपछि उनीहरुले रक्सी पिउन सिकेको बताएका छन् । यी दुई छात्रालाई यसरी समातिएको पहिलो घटना भने होइन । उनीहरुलाई यसअघि पनि यसैगरी रक्सी पिइरहेको अवस्थामा रंगेहात समातिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः यौन सम्बन्धी यस्ता ७ अनौठो तथ्यहरु जुन थाहा पाउदा पत्यार लाग्ने छैन – दुनियामा जन्म, मृत्यु जस्तै सम्भोग पनि शाश्वत सत्य हो । सृष्टि चक्र संचालनका लागि यो अनिवार्य सर्त हो । यौन तथा सम्भोगको विषय मानिसले उमेर पुगेसँगै आफै जान्ने तथा सिक्ने विषय पनि हो । तर दुनियाको अनिवार्य तथा शाश्वत सत्यको रुपमा रहेको सेक्सका विषयमा धेरै तथ्य तथा सत्यहरुका बारेमा हामी बेखबर हुन्छौँ । कतिपय तथ्यहरु त पत्यारै नलाग्ने पनि हुन्छन् । सेक्स सम्बन्धी केही तथ्य यस्ता छन् ?
(सम्भोगले मानिसले पीडा सहनसक्ने क्षमता बढाउँछ । सम्भोगको चरम सुखका बेला सरीरमा उत्सर्जन हुने हर्मोनले पीडा कम गर्दछ र पीडा सहने सीमा पनि बढाइदिन्छ । (एक स्वस्थ पुरुषले एक हप्तामा यति धेरै शुक्रकिट स्खलन गर्न सक्छ की त्यसले विश्वका सबै महिलालाई गर्भाधारण गर्न पुग्छ । (पुरुषको यौनांगबाट विर्य बाहिर निस्किएसँगै विर्यमा रहेका शुक्रकिट बाहिरी वातावरणमा केही सम्म मात्र बाँच्न सक्छन् तर यदि विर्य महिलाको योनीभित्र प्रवेश गर्यो भने तीन देखि पाँच दिनसम्म बाँच्न सक्छन् । (सम्भोग गरेलगत्तै पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ र पिसाब निकाल्नै कठीन हुन्छ । यसको कारण छ । किनकी सम्भोगका बेला सरीरमा एन्टी ड्युरेटिक अर्थात् पिसाब प्रतिरोधी हर्मोन निस्किएको हुन्छ जसले पिसाबको प्रवाह रोकिदिएको हुन्छ । त्यसको असर सम्भोगको सत्र सकिएको केही समयसम्म पनि रहिरहनछ ।
(सम्भोगका बेला पूरै चरम आनन्द प्राप्त भएको क्षणमा महिलाको स्तनको आकार सामान्य भन्दा २५ प्रतिशत सम्मले बढ्ने गर्दछ । (सम्भोग तनाव निवारक औषधि पनि हो । सेक्सको बेला उत्सर्जन हुने रिल्याक्सिंग हर्मोनका कारण ब्लड प्रेसर कम हुन्छ र मूड पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले सम्भोगले टाउको दुखेको तथा तनाव जस्ता कुरा शान्त गरिदिन्छ । (अध्ययन अनुसार हप्तामा कम्तिमा पनि तीन पटक सम्भोग गर्ने मानिसहरुमा बुढोपनाले छिटै सताउने समस्या कम हुन्छ । –एजेन्सीको सहयोगमा
एप्पलले आफ्नो पहिलो गाडी ‘एप्पल कार’ सार्वजनिक गर्ने
एप्पलले आफ्नो पहिलो गाडी ‘एप्पल कार’ सन् २०२४ मा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। एप्पल इन्साइडरका
अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन – तालिवान प्रवक्ता
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको प्रस्थान अफगानहरूका लागि ‘ऐतिहासिक क्षण’ भएको तालिबान नेता जाबिहुल्लाह मुजाहिदले बताएका छन्
लन्डनमा नेपालीको गुम्बा स्थापना
लन्डन सहरको दक्षिण पूर्वमा रहेका बुद्ध धर्म अनुयायी नेपालीले गुम्बा स्थापना गरेका छन् । डायमण्ड
सिटीसँग डियाजले ६ वर्षसम्मको सम्झौता नवीकरण गरे
पोर्चुगलका रक्षक रुबेन डियाजले इङ्लिस प्रिमियर लिगको क्लब म्यानचेस्टर सिटीसँगको सम्झौता नवीकरण गरेका छन् ।